I-PRINCE2 Isiqinisekiso: Isikhokelo esigqibeleleyo-ITS Tech School
I-PRINCE2 Isiqinisekiso: Isikhokelo esigqibeleleyo
I-PRINCE2 isicacisi seProjekthi kwiindawo ezilawulwayo. Yindlela yokwenza iprojekthi ehleliweyo ekukuvumela kuzo zonke iinjongo zokulawula iprojekthi ngempumelelo. Ekuqaleni kwakujoliswe kwiindawo ze-IT kuphela, kodwa iquka zonke iindidi zeeprojekthi kunye nazo zonke izigqeba zoshishino ngokukhululekile. Ekuqaleni, xa ikhutshwe kwi-1996, yayiyindlela yokulawula iphrojekthi ye-generic kodwa ngoku i-standard-de-facto yolawulo lweprojekthi kwiinkampani ezininzi zaseburhulumenteni zase-UK kunye namashishini abucala. I-PRINCE2 igxininisa ngokukwahlula iiprojekthi kwiindawo ezininzi ezilawulwayo kwaye zilawulwa kalula. Isiqinisekiso se-PRINCE2 sinokukunceda ngokukhula komsebenzi
Kwi-2013, amalungelo obunini be-PRINCE2 adluliselwe kwi-HM Ofisi yeKhabhinethi AXELOS Ltd (ubunikazi babo babelwe phakathi kweKhabhinethi Ofisi kunye neCapita plc.).
I-PRINCE2 Isiqinisekiso - Isikhokelo esigqibeleleyo
ISINYATHELO I - PRINCE2 Uqeqesho lweSiseko
ISINYATHELO II - UQEQESHO LWABASEBENZI BEQINISO
Ukuba ungumntu onomdla kwiindima zokulawula iprojekthi, isatifikethi se-PRINCE2 sinokukunceda ngokukhula komsebenzi. Esi siqinisekiso siquka amanyathelo amabini: I-PRINCE2 Foundation kunye no-PRINCE2. Ikhosi ye-PRINCE2 yoqeqesho lokuqeqesha iyakulungiselela bobabini kwaye ikwazise nawe ngomgangatho we-de-facto ngoku ulandelwa emhlabeni jikelele. Ngexesha loqeqesho loqeqesho, umntu uzuza ubuchule kwiikhokelo zolawulo lweprojekthi kunye nezenzo ezifanelekileyo kangangoko imigangatho ye-PRINCE2.
PRINCE2 yindlela yokulawula iphrojekthi eqhutywe kumgaqo-nkqubo. Iqukethe imigaqo emisixhenxe, izihloko ezisixhenxe kunye neenkqubo ezisixhenxe.
IIMVIWO: Izihloko ziyimpawu ebalulekileyo yiphina iphrojekthi, ekufuneka iqwalaselwe ngokuqhubekayo kwaye idibeneyo ukuba kuphunyezwe iprojekthi. Iingqimba ezisixhenxe zi:
IINQUNUNU: Ulawulo lweprojekthi lubandakanya imigaqo emithathu eyisiqhelo sezinto ezilungileyo ezinokusetyenziswa kwiphina iphrojekthi. Iimigaqo ezisixhenxe zi:
UkuCwangciswa koShishino oluqhubekayo
Inkcazo ecacisiweyo kunye noXanduva
Ukujongana ne-Suit yeProjekthi yeNdalo
IINKCUKACHA: Iinkqubo ezisixhenxe ziyimfuneko ebalulekileyo efunekayo ekulawuleni, ekuqondiseni nasekunikezeni iprojekthi ngempumelelo. Iinkqubo ezisixhenxe ziquka:
Ukulawula iSigqeba soMgca
Imigaqo ekhankanywe ngasentla ichazwe kule zi sixhenxe iinkqubo.
Izizathu eziphambili zokuba kutheni ufanele ufumane i-PRINCE2 Certification?
Ukufumana umgca wokuncintisana phakathi koontanga bakho- Ukufumana isatifikethi se-PRINCE2 kukuqinisekiswa kwamakhono akho njengengcali yolawulo lweprojekthi kunye nokukwazi kwakho ukusebenzisa iindlela ze-PRINCE2.
Ukuqwalaselwa kolwazi lwakho, izakhono kunye nobuchule-Kuyinto engavumelekanga ukungabikho kwamagosa olawulo lweeprojekthi kwilizwe lonke.
Impumelelo- I-PRINCE2 isatifikethi ibonisa ubuchule bomntu njengomlawuli weprojekthi yehlabathi jikelele.
Amathuba omsebenzi ongcono kunye nemali eyongezelelekileyo- Ngeli siqinisekiso, uya kuba nokuphonononga amathuba angcono emisebenzi. Abanini bemvume bangalindela ukwanda komvuzo.
Ukuqhubela phambili kwi-career- Ukufumana isatifikethi se-PRINCE2 sibonisa ukulungela kwakho ukuthatha uxanduva lomsebenzi.
Ukuphucula ulwazi nolwazi-Ukulungelelaniswa kwe-PRINCE2certification kufuna ukuba ufunde kwaye ubuyekeze iinkqubo zolawulo lwamanje kunye nobuchwepheshe obuqeshwe. Oku kugqityiwe isatifiketi esiyifumanayo.
Ukwandisa ukuzithemba- Ngolwazi, ubuchule, izakhono kunye nokuchithwa kwemboni, ngokwemvelo ukwakha umqondo wokuzithemba kwaye uzilungele ukuchaza ngokwakho ngaphandle kwesihloko somsebenzi.
Bona kwakho: I-PMP yeSatifikethi seMisebenzi yeMisebenzi
Uqeqesho lwe-PRINCE2 Foundation lugxininisa kwimfundiso. Ukuziqhelanisa neengcamango kuqinisekisa ukuba umviwa uziva ekholo xa eqhuba izicelo zokufunda ze-PRINCE2 kwiziko lezakhono. Imigaqo, imixholo kunye neenkqubo kufuneka ziqondwe ngokubanzi.
IsiSeko seMvavanyo sihlola umviwa ngokukwazi kwakhe ukwenza njengelungu elisezantsi lenkampani yokulawula iphrojekthi esebenzisa i-PRINCE2. Ukucoca uviwo kuqinisekisa ukuqonda komviwa wegama le-PRINCE2 isigama, imigaqo yayo, iintetho kunye neenkqubo.
Ekugqityweni koqeqesho lweSiseko, ootitshala bangakwazi ukwenza oku kuphumelelayo:
Ukuqulunqa ngenjongo kunye nomxholo wazo zonke iindima kuzo zonke iindatshana ezisixhenxe, imigaqo kunye neenkqubo.
Ukuqulunqwa kweyiphi iiprojekti zolawulo ezifakelwayo kunye / okanye ukuphuma kwiinkqubo ezisixhenxe.
Ukuqulunqwa kokubhaliweyo kunye neenjongo eziphambili zemveliso yolawulo.
Ukuseka ubudlelwane phakathi kweendima, iinkqubo, ubukhulu bokuphatha kunye nokunikezelwa kweprojekthi.
Uvavanyo lwesifundo seSiseko:
Ifomathi - imibuzo ekhethiweyo yokukhetha
Imfuneko - akukho
Inani elipheleleyo. imibuzo - 75
Imibuzo yovavanyo - 5
Amanqaku okupasa - 35 (okanye i-50%)
Ixesha lokuhlola: i-1 iyure
Uhlobo lwe-Exam-Closed book
ISINYATHELO II - UQEQESHO lwaBasebenzi be-PRINCE2
Emva koQeqesho lweSiseko, isiqinisekiso soqeqesho lwe-PRINCE2 sokuqinisekisa ukuba umviwa uphumelele ukuqonda ukusetyenziswa kwe-PRINCE2 kwiiprojekthi zangempela. Ngendlela efanelekileyo, umviwa uza kuba nako ukusebenzisa iindlela ezifundayo kwiprojekthi ekhoyo yokuphumelela kwayo.
Ezinye iinjongo zokufunda ze-PRINCE2 zifunwa kuphela kwiNqanaba loMsebenzi. Nangona uvavanyo lweSiseko luvavanya ulwazi lomviwa we-PRINCE2 themes, imigaqo, iinkqubo kunye neendima, uvavanyo lwabaSebenzi livavanya indlela yabo yokusebenzisa indlela ye-PRINCE2 kwimeko ethile.
Emva kokucima uqeqesho lwe-PRINCE kunye novavanyo, uya kuba nakho:
Ukuvelisa inkcazo ecacileyo yazo zonke iindatshana, imigaqo kunye neenkqubo ezinemizekelo yazo zonke iimveliso ze-PRINCE2 kwisicelo sokujongana nesimo seprojekthi ethile.
Ukubonisa ukuqonda ubudlelwane phakathi kwemigomo, iindikimba kunye neenkqubo kunye ne-PRINCE2 iimveliso kunye nokukwazi ukusebenzisa le nkcazelo.
Ukuqonda isisiseko esilandelayo kwimigaqo, iindatshana kunye neenkqubo kunye nokuqonda imigaqo elandelayo kwezi zinto.
Iimfuno ezifunekayo - IPINCE2 Foundation, PMP®, CAPM®, IPMA-D, IPMA-C, IPMA-B, okanye IPMA-A
Ifomathi - Uhlobo lwenjongo, imibuzo ye-8 X Izinto ze-10
Amanqaku okupasa - 55%
Uhlobo lwe-Exam - Open book (i-official PRINCE2 manual)
Iingcebiso ezibalulekileyo zophando:
Ukuqokelela izinto ezifanelekileyo zokufunda. Iwebhusayithi esemthethweni yeAXELOS ingaba luncedo kuloo nto.
Zama ukulungisa isampuli okanye ezimbini ukuhlalutya inqanaba lakho kunye nekhonkco kwindawo yakho ebuthathaka. Kuya kukunceda ukuba usebenzise ifomathi yokuhlola. Iphepha lesampula linokukhutshwa kwiwebhusayithi esemthethweni yeAXELOS.
Izindlela okanye iinkqubo ezilandelwayo kwintlangano yakho yangoku akunakunceda. Ngoko kungcono ukunamathela kwiindlela zePRINCE2 ngelixa uphendula.
Kuya kukunceda uzibonele izakhono zakho.
Uqeqesho lweziko le-ITIL kwi-lake view, eFlorida ukusuka kwi-7 th kwi-9 ngo-Agasti
Ukukhutshwa kwe-ITIL Foundation Training 16th Sept. - 17th Sept.